Wiil 14-sano jir Soomaali ah oo la baafinayo | Somaliska
Wiil 14-sano jir Soomaali ah oo la baafinayo
Booliska ayaa warbaahinta ku soo daabacay sawirka wiil 14-sano jir ah oo Axadii tariikhdu markay ahayd 2015-08-16 la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay. Wiilka ayaa waxa uu deganaa magaalada Strömsnäsbruk ee ka tirsan degmada Markaryd ee gobolka Kronoberg. Wiilka ayaa la sheegay in adeeg loo diray saacadu markay ahay 18:00 dukaanka Ica.
Markii uu maqnaa saacado ayaa la tabay kabacdi familkii ayaa banaanka u baxay oo magaalada karaadiyay. Wax yar kabacdi ayaa waxaa la helay boorso wiil ka loo sii dhiibay oo taala meel wabiga agtiisa ah reerkana waxaa u dhowaa wabiga. Ilaa hada lama garanayo waxa ku dhacay wiilka iyo sababta ka dambaysa.
Booliska ayaa sheegay in arintu ay noqon karto in wiilka uu dhuuntay ama uu dhacay shil kale. Waxay sheegeen in ilaa hada aysan cadeyn u hayn in wiilka wax la gaarsiiyay oo dambi la galay. Booliska ayaa wiilka ku raadiyay diyaarado iyo baabuur intaba iyadoo aan ilaa hada la helin.
Hadaba cidii garanaysa wiilka yar ama aragtay, waxaa laga codsanayaa in ay booliska si degdeg ah ula xiriiraan.
Bilihii la soo dhaafay waxaa soo badatay caruurta Soomaalida ee lumaya. Maxay noqon kartaa sababta?
August 18, 2015 at 16:03
Miskiin Allah waxan ka baryaya inu soo nabad celiyo asagoo cafimad qaba
August 18, 2015 at 16:41
Asc eeda 1 waxa leh waalidka willka yar wakhtii xun banaanka uu diriya amar Alle waa halkii lakiin
in wakhtii xun la diro ma’aha Somaaliya maha meesho ee curuurtiina ilaashada ilaahay ayana wax
ilaaliya Ilaahay waxaan ka baryaya in waalidkii uu soo celiyo isgo nabad qaba
August 18, 2015 at 22:45
Amiin ilaahayow asagoo nabad ah waalidkii usoo celi yaa raxmaan
ilaahay waxaan ka baryayaa in wiilka walalkay ah uu ilaahay kasoo war yeeriyo
MASSAGO VS Cabdiweli says:
WOW DHINTAY WIILKAAS WAXEEYNA KU QORANTAHAY WARGEYSKA EXPRESSEN.SE BIRIGA OO ARBACO AH ABAARIHI 12,00 AYAA HOOSTA LAGA XARIIQAY INAW AMUUDAY WABIGA LOOGA SHAKISNAAY DHAXDA UGA DHACYAY ALLAHA U ANXARIISTO WAALIDKA DHALAYNA SAMIR,,IIMAAN ALLAHAH KASIIIIYO
August 19, 2015 at 16:07
Ilaahay ha naxriisto Samir iyo imaan Alle ha ka siiyo waaalidka uu ka geeriyooday
August 20, 2015 at 21:17
inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun ilaahayoow unaxariiso wiilkaa yar samir iyo iimaana alle ha inaga siiyo